Indlu enkulu emaphandleni kwiiMts du Lyonnais
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnnie
Indlu ye-120 m2 kumanqanaba ama-2, ixhotyiswe ngokupheleleyo, i-wifi, iTV ... indawo efanelekileyo yokuphumla kwindawo ezolileyo yasemaphandleni. Umoya wothando onebhedi enepowusta ezine! Ukubakho kwebhafu enewhirlpool!
Amagumbi okulala ama-4: abantu abayi-9, ikhitshi elixhotyiswe (i-plancha, inkonzo ye-raclette, i-dishwasher), i-23 m2 igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, i-terrace enefenitshala yegadi kunye ne-barbecue. Ukufika ngokuzimeleyo kunokwenzeka.
Iikhilomitha ezingama-25 ukusuka kuhola wendlela, iikhilomitha ezingama-45 ukusuka eLyon. ISupermarket kunye nazo zonke iivenkile imizuzu emi-5 kude.
Ukuthuthuzela kwakho kunye nokuhlala okumnandi, iintlawulo kunye nokufudumeza zibandakanyiwe, iibhedi zenziwe ekufikeni. (Inxaxheba iya kucelwa iitawuli kunye ne-whirlpool).
Ibhedi yomntwana okanye ukhuko lokuhamba lunokwenziwa lufumaneke kuwe.
I-cottage inayo yonke into oyifunayo: ikhitshi ene-dishwasher, i-microwave, ii-hotplates, i-oven, ifriji / ifriji, umenzi wekofu weTassimo, izitya (iiglasi zewayini, iifluti zechampagne ...).
4.79 · Izimvo eziyi-47
Iziko zasemanzini kunye nawebhola kwi-3 km, ichibi, ukunyuka intaba, intaba ibhayisekile ukhenketho, utyelelo kwi mboni okanye yembali, iipaki umxholo (Jesu terra: park ephakathi kwaye ilali e Haute-Rivoire: 4 km), iipaki zezilwanyana, imisebenzi Water: Villerest ichibi , ngaphandle kokulibala ukuloba kunye nokunyuka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Les Halles